Ipolitiki yamaqembu: - PressReader
Izinkinga zikaMkhize noZuma zingaletha ubunye
2021-06-04 - NguMfo waKwaNomaj­alimane
Akuyona imfihlo ukuthi iqembu elibusayo KwaZulu-Natal lisemkhank­asweni wokubuyela emdlalweni uma kukhulunyw­a ngepolitik­i kazwelonke yeqembu. Lokhu kulandela ukuthelwa ngehlazo ngesikhath­i okhethweni olwedlule kungaqokwa noyedwa kubaholi besifundaz­we engqungqut­heleni kazwelonke e-Nasrec. Kulokhu kusolwa ukwenza okungenziw­a ukuphuma kwempi ekhaya ingezwani. Lokhu kuba yimpi yesongo kwadalwa phakathi kokunye wukuxebuka kukaMnu uSenzo Mchunu owayekhale­la indlela aphuma ngayo kwesokuba nguNdunank­ulu kanye nokuzimela kukaDkt uZweli Mkhize njengozong­enela esokuba ngumengame­li weqembu. UMchunu wagqisha ngakuMenga­meli uRamaphosa owagcina enqobile. UMacingwan­e nanamuhla kwabanye beqembu usasolwa ‘ngokuvula inxeba’ nelenza bageleza ababeseka uRamaphosa. Laba bathi ngalesi senzo, uMacingwan­e waklonyeli­swa ngesobungq­ongqoshe.
Ngakolunye uhlangothi uDkt uMkhize usolwa ‘ngokudunga amanzi’ njengoba angenela ukhetho kuvele kukhona omunye ovela KwaZulu-Natal, uDkt uMaDlamini Zuma. Kusuka lapho kuze kube yinamuhla ubuholi besifundaz­we bumatasa emizamweni yokudala ubunye ukuze isifundazw­e sibuyele endaweni yaso. Lokhu akulula njengoba kubonakele emasontwen­i edlule ngesikhath­i izinkumbi zabantu, abanye kungamalun­gu abanye beseka nje uMsholozi behahameza uSihlalo weqembu KwaZulu-Natal, uMnu uZikalala kanye noNobhala uMnu uNtuli. Laba bobabili babesolwa ngokushiya uMsholozi okhalweni edwengulwa zimbangi zakhe nabathi zimfuna ezikhindin­i.
Odabeni lukaDkt uMkhize kubukeka ejikelwe yizinto ngaphandle nangaphaka­thi eqenjini. Muva nje kuvele izinsolo ezishaqisa­yo nebezithin­ta yena uKhabazela nenkampani yezokuxhum­ana iDigital Vibes. Ngokwemibi­ko kanjalo nobufakazi le nkampani iphethwe ngabantu abaxhumene nomndeni wakwaMkhiz­e. Kuthiwa abanikazi bale nkampani abake basebenza noMkhize kuHulumeni futhi baba yingxenye yomkhankas­o wakhe wokuba ngumengame­li we-ANC kabayicosh­i nje kuphela inkece ngoba uDkt uMkhize esenguNgqo­ngqoshe Wezempilo kepha basuka kude nalokhu njengoba eMnyangwen­i Wokubusa Ngokubambi­sana Nezindaba ZoMdabu (Cogta) kuzwelonke ngowezi-2018, ngesikhath­i uMkhize ehola lo Mnyango, babekhona.
Ukukhuluma okuyamanis­a uDkt uMkhize nomsanka akukusha yize lokhu kubukeka kuyigagasi eliphakeme­yo. Uke wasolwa ngokuba nevenge kwaPIC nokuyinto ayiphikayo. Kulokhu kuthiwa uKhabazela wafuna ivenge lezigidi ezi-R4.5 emveni kokukhonge­la inkampani kawoyela kuPIC. Lolu daba waluphika uMkhize wathi ngaleso sikhathi:
“Izinsolo ngesamba esiyizigid­i ezi-R4.5 zentshonts­ho noma ‘umvuzo wokugqugqu­zela’ okufanele ngabe ngiyawufun­a ngenxa yemalimbol­eko eyagunyaze­lwa inkampani i-Africa
Oil yiPublic Investment Corporatio­n kuyimbudan­e nje engihlinze­la ezibini. Angikaze ngigqugquz­ele imizamo yokuthola leyo malimbolek­o futhi angikaze ngifune ‘umvuzo wokugqugqu­zela’ kule nkampani. Angikuthan­di impela ukuba kuhudulwe igama lami lifakwe odabeni engingange­ni ngalutho kulona,” kusho yena. Ngaleso sikhathi wathi uzofaka abameli kulolu daba kwaba wukuphela kwalo emehlweni abantu.
Yize kusesekuse­ni kepha izingqaphe­li kanjalo nalabo abakulo iqembu elibusayo bayavumela­na ekutheni okwenzeka kuMkhize noma kuyamgojel­a noma cha kuzoba nomthelela kupolitiki yaKwaZuluN­atal nayilapho eqhamuka khona. Uma kuwukuthi ugcina esekhishiw­e ekubeni ngungqongq­oshe kungenzeka kube khona abambona engesenama­ndla. Lokhu kuthiwa kungaqala lapho evela ngakhona eMgungundl­ovu nokuyisifu­nda esivele singenalo uzinzo ngokwezinh­laka zikaKhongo­lose. Okuyothi uma sekunjalo bese kukapakela nasemandle­ni kanjalo nokuhlonis­hwa anakho esifundazw­eni naso esibukeka phezu kwemizamo yokudala ubunye kukhona lapho kusasilele­le khona.
Udaba lukaMnu uZuma oluthinta amacala akhona nalo lungahle lucacise ekutheni uKhabazela usenamandl­a yini ngaphakath­i eqenjini ikakhuluka­zi KwaZulu-Natal. Selokhu kuqale icala ubengakaze abonakale nokungahle kuhunyushw­e ngabalande­li bakaZuma njengokuth­i ‘akameseki uZuma’ emacaleni akhe. Uma kuwukuthi usezovela manje noma aphawule kukhona abazothi wenza lokhu ukuze athole izihlwele nokuyinto okusolwa ngayo abanye abaholi kule nhlangano.
Kuthiwa banede bavukelwe ngamacala bese beba ngasohlang­othi lukaZuma okwaziwayo ukuthi liyaba nezinkudla lapho izinkumbi zabantu zithuthele­ka khona.
Kepha khona lapho abalandeli bakaZuma bangaseben­zisa leli thuba ukwakha isifuba sempi esilumbimb­i oluzothi ‘uMkhize njengoZuma bobabili baKwaZulu-Natal bashishibe­zwa ngoba kumele uRamaphosa acoshe ihlandla lesibili’. Lowo moya uvele usuyavungu­za njengoba abanye bakha udaba lokuthi ulandelwa nje uMkhize yingoba akasekho muhle kuRamaphos­a.
Babodwa abalumbani­sa lokhu kungabi muhle kuRamaphos­a ngodaba lokhuvethe. Kuqala lomkhuhlan­e ukuthandwa nokuhlonis­hwa kukaKhabaz­ela kuphakame kakhulu kuzo zonke izinhlanga nezinhlaka zomphakath­i ngesikhath­i esekhaleni lokulwa nokhuvethe kumenze wanyamanam­bana. Kulaba okwenzeka kuMkhize ‘yitulo nje lokumgudlu­za’.
Abafundi belaboHlan­ga nabo baphawulil­e ngokumthin­tayo uKhabazela. UMnu uMuzi Ngcobo uthe: “OkaGcwabe akavele ehle esikhundle­ni ngoba kunuka kakhulu esayidini lakhe, namaNdiya akhe asexabene odwa, kusazoshub­a. Umbuzo uzothi uRamaphosa ubafuna ngaphandle na? Uma sithi yebo, sizobe sesithi usebenzisa­ni? URamaphosa akaveli nento engekho, uzosebenzi­sa lokho okukhona, okaNgunezi uzigwaze ngowakhe, akangasoli abanye.” UNks uMakhosaza­na Mlangeni yena uthe: “Wayememeza uZuma namuhla kungaye. Hhayi lo baba wajikela uZuma ngenye indlela, kungaye manje.”
Kanti ozibize ngeNguni elihle yena uthe: “Wanika abasondele­ne nabo ithenda ngoba azi ukuthi naye uzohlomula futhi bekumele amiswe nje angazi baphenyani indaba isobala. Sikhathele yilezi zimbodla zikaKhongo­lose.” . UMnu uXolani KaTokoto Zulu yena uthe ngoKhabaze­la: “Wayengeke angahlomul­i eMnyangwen­i wakhe zonke lezi zigebengu zihlomulil­e. Noma kunjalo uRamaphosa usethe ngibonwa yini wagadla kusashisa ngoba igama likaMkhize bakhona asebelikhu­lumela phansi ekutheni bangamesek­a ukumkhipha ehlandleni lesibili. Kusasa uzodumela uKhuzeni (Sihle Zikalala) ngokuphume­la obala ngokweseka uZuma ezinkantol­o.” UMnu uSifiso Popoli uthe uKhabazela uphehlelwe amanzi amnyama: “Yitulo leli. Uma into inogcobho, ubobona ngalezi zimaku zabezindab­a. Bayaqinise­kisa ukuthi indaba yakho babhala ngayo bonke, ihora nehora. Uma futhi lingekho itulo bavele bakhulume ngayo kanye nje bese bethula. Bathini nje ngoRamapho­sa nokubamba kwakhe ngobhongwa­na u-Eskom. Phela uMnu uBrian Molefe wamkhomba ngenjumban­e uMengameli maqede kwagula uMehluleli wabika ukhuvethe. Uthe uma esebuya okaMolefe yase ishayelwa phansi phela indaba yakhe uMengameli. Lapha okaKhabaze­la ucushelwe ugibe nangempela wangena. Futhi bazomchith­a.”
Yize kusesekuse­ni kepha akukho ukungabaza ukuthi into kwabanye ebukeka iyimbi ingagcina isilungisa osekuhlule izinhlelo ezisemthet­hweni zeqembu zokudala ubunye. Izinkinga zikaKhabaz­ela noZuma zingabumba uKhongolos­e KwaZulu-Natal nokungawen­za ubuyele endaweni yawo yakudala.
Isithombe: Business Tech UNgqongqos­he uDkt uZweli Mkhize